Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo la kulmay Ganacsato Soomaaliyeed – Diinsoor.com
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo la kulmay Ganacsato Soomaaliyeed
Posted By: ibbaba
Agosto 10 (Jowhar)— Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga Madaxtooyada ee Jamhuuriyada Jabuuti ku qaabilay Golaha Ganacsiga iyo Maalgashiga Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayay Sheekh Axmed Nuur Jimcaale oo ah Guddoomiyaha Golaha.
Kulankan ayaa ahaa mid la isku dhaafsaday fikrado kala duwan iyo talooyin, iyadoo Madaxweynaha Jabuuti uu ka mahad celiyay horumarka ganacsi ee ay ku tallaabsadeen.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa kula dar daartay Ganacsatada sidii ay isugu xirmi lahaayeen, isla markaana ay ka qeyb qaataan dib u dhiska Soomaaliya iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa.
Guddoomiyaha Golaha Ganacsiga iyo Maalgashiga Soomaaliyeed Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo kulanka markii uu soo dhamaaday saxaafada uga warbixiyay ayaa sheegay in Madaxweynaha Jabuuti ay uga mahad celiyeen waxqabadkiisa, iyo baaqiisa ku aadan in Ganacsatada Soomaaliyeed ay Jabuuti ganacsiyo ka furtaan.
Sheekh Axmed Nuur Jimcaale ayaa sidoo kale uga mahad celiyay madaxweynaha Jabuuti garab istaaga iyo taageerada uu u muujiyay Ganacsatada Soomaaliyeed, isagoo xusay in markii Golaha Ganacsiga iyo Maalgashiga Soomaaliyeed xafiiska ka furteen Jabuuti sanadkii 2007 ay Ganacsatadu ku tallaabsadeen horumar kala duwan.
Ugu dambeyn shirweynaha Golaha Ganacsiga iyo Maalgashiga Soomaaliyeed ee ka dhacay dalka Jabuuti ayaa waxaa mar kale Guddoomiye loogu doortay Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo bishii hore laga saaray liiska waxa loogu yeero
Be the first to comment on "Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo la kulmay Ganacsato Soomaaliyeed"
Leave a comment Cancel replyYou must be logged in to post a comment.	Recent Posts	Shirka guud ee wada hadalka
Beeraha oo baxay
Gabar Soomaali ah oo ku guuleysatay Xubinimada Baarlamaanka Gobolka Minnesota
Degmada Baardheere cuna qabatayn ma saarna, dowladda ayaana xukunta. Yaa ka qaaday cunaqabataynta?
Qabaa'lka deriska ayaan ciil u qabin
Xooggooda ayey isaga qaadeen